Job vacancies | Digital Laboratory ﻿
Boyarnyut street, Dagon, Yangon
Digital Stacks ကုမ္ပဏီသည် Customer များပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသောဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ကြီးတွင်စီးပွားရေးနယ်ပယ်သစ်များ၏အောင်မြင်မှု၊တိုးတက်ကြီးပွားမှုများကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးမည့် Digital Stacks ဖြစ်ပါသည်။
ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေများပြားသောယနေ့ခေတ်ထဲတွင် Digital Stacks ကုမ္ပဏီနှင့်လက်တွဲခြင်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေတို့၏ကုမ္ပဏီသည်တစ်ပန်းသာနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Digital Research ကုမ္ပဏီသည် မိမိတို့ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်အောင်မြန်ရန် IT နည်းပညာများအသုံးပြုသည့် အရင်းရှင် လုပ်ငန်းရှင်များ ခေါင်းဆောင်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါသည်။IT နည်းပညာအချက်အလက်များ စုစည်းကာ အနာဂတ်တွင် တွင်ကျယ်လာနိုင်သော IT Businessများအား customer များနှင့်အတူ ရှာဖွေဖန်တီးခြင်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
Fashion & Cosmetics Interviewer & Writer
•	Go out of the office and take charge of various interviews, including street interviews •	Create editorial plans to introduce trends in Women's Fashion, Cosmetics to people in Myanmar •	Write website articles according to the set editorial plans •	Do the related research work
Digital Stacks ကုမ္ပဏီသည် Customer များပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသောဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ကြီးတွင်စီးပွားရေးနယ်ပယ်သစ်များ၏အောင်မြင်မှု၊တိုးတက်ကြီးပွားမှုများကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးမည့် Digital Stacks ဖြစ်ပါသည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေများပြားသောယနေ့ခေတ်ထဲတွင် Digital Stacks ကုမ္ပဏီနှင့်လက်တွဲခြင်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေတို့၏ကုမ္ပဏီသည်တစ်ပန်းသာနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
•	Technical support and implementation support for our products by using analytics tools like “Adobe Analytics” •	Create implementation plans and estimates for new and existing clients •	Develop productive working relationships(eg.information sharing)with teams in other territories(Japan, China) •	Support for other business
•	KPI design and KPI monitoring •	Verification of the effect of marketing measures based on data analysis and report •	Proposal for Improvements based on the results from above-mentioned work and report •	Social Media advertising, web advertising •	Support for other business
•	Create editorial plans to introduce trends either on Auto, Apps, Music, Movie, Fashion to people •	Write website articles according to the set editorial plans •	Do the related research work
Assistant Translator(English To Japanese) •	Proofreading machine translated contents such as blog articles, white papers, etc. •	Check glossary consistency. •	Create and manage glossaries and translation memories.
•	Video Editing •	Video shooting, photography •	Create web video contents, operate web media site
Work in Yangon (Rangoon)(4346)
Work in Yangon Region(1912)
Work in Ayeyarwady Region(81)